Kusebenza Kanjani Ukukhangisa
ULwesithathu, May 4, 2016 ULwesine, May 5, 2016 Douglas Karr
Ngenkathi ngicwaninga ngesihloko se ukukhangisa, Kwenzeka nge-infographic on Ukuthi Ukukhangisa Kusenza Sithenge Kanjani. I-infographic engezansi ivula ngombono wokuthi izinkampani zicebile futhi zinenqwaba yemali futhi bayisebenzisela ukuphatha izethameli zabo ezihluphekayo. Ngicabanga ukuthi lowo ngumbono ophazamisayo, oneshwa, futhi ongalindelekile.
Umbono wokuqala wokuthi izinkampani ezicebile kuphela ezikhangisa ngumqondo ongajwayelekile. Inkampani yethu ayicebile futhi, empeleni, ilahlekelwe yiminyaka embalwa - kepha sisakhangisa. Ukukhangisa, ikakhulukazi ngeziteshi zedijithali, kuyabiza kakhulu. Ungafaka u- $ 100 kunoma iyiphi inkokhelo yezenhlalo noma yosesho nge-akhawunti ngayinye yokuchofoza bese ucindezela ezinye izikhangiso ezihlosiwe kakhulu ukuqwashisa ibhizinisi lakho.
Isimo sengqondo ngebhizinisi asihambelani kahle nezibalo zangempela emhlabeni wezokuxhumana. Cishe i- Ikota yawo wonke amabhizinisi ayahluleka eminyakeni emibili yokuqala ngokusho kwezifundo eziningi. Ngenkathi Abantu bakholelwa ukuthi inkampani emaphakathi yenza inzuzo engama-36%, isilinganiso semali yenzuzo yekota yakamuva bekungu-7.5% kanti imajini yenzuzo ephakathi ibe ngu-6.5%.
Uhlu luka-Angie, ngokwesibonelo, luqhubeke nokusebenza ngokulahleka ngenkathi lusebenzisa amaRandi ayizigidi ezingama-80 ekumaketheni - ingxenye enkulu yalokho iya kuzikhangiso zethelevishini ozibona kaningi kuthelevishini. Ngenkathi inkampani yomphakathi ekhulisa ikota yemali ngaphezulu kwekota, akunjalo Ocebileyo. Hhayi nje ukuthi abacebile, kepha futhi abakhangisi ukwenza amakhasimende abo azizwe Ocebileyo. Uhlu luka-Angie luhlinzeka ngensizakalo yokuvikela amakhasimende ezinsizakalo zasekhaya ekuqothulweni kunqwaba yabahlinzeki abanomthunzi laphaya.
Ukukhangisa kusebenza kumazinga ahlukene; akulula njengokuzama ukwenza umuntu athenge okuthile. Eminyakeni eyishumi edlule yokuqukethwe, ukuseshwa, nokumakethwa komphakathi, ngikholwa ukuthi izinkampani ziya ngokulangazelela okukhulu ukuthi ukukhangisa kudinga ukuba kujule kakhulu kunokukhohlisa ukuphepha kwabathengi. Ukukhangisa okubhekiswe kubathengi abafana nezithameli zakho kwandisa inzuzo ngokuthola nokugcina amakhasimende amahle.
Kungani Usebenzisa Ukukhangisa?
Isisekelo sakho konke ukukhangisa ukumane kube ukuqwashisa. Ukuqwashisa kuyathandeka ezinkampanini ngezizathu ezimbalwa:
Finyelela - Ukwakha ukufunwa komkhiqizo wakho, imikhiqizo noma insiza, kufanele ukwazi ukufinyelela izethameli ezintsha. Lezo zilaleli sezivele zikhona kumawebhusayithi, usesho, imithombo yezokuxhumana, umsakazo, ithelevishini nakwezinye izindlela zokuxhumana. Ukufinyelela lezo zilaleli, izinkampani ezitshale imali futhi zabathola zinikela ngokukhangisa.
ukubona - Mhlawumbe abantu sebevele bayayazi imikhiqizo nezinsizakalo zakho kepha abanakho ukubona okuhle ngomkhiqizo wakho. Ukuphikisana nemibono yomkhiqizo engalungile, kwesinye isikhathi kuyadingeka (noma kubucayi) ukuthi imikhiqizo izotshala imali ekukhangiseni.
Sales - Ukuthengisa ngokushayela ngokukhangisa kungasebenza, kepha ngingakuphonsa inselelo ukuthi ubone ukukhangisa kwendabuko kanye nedigital isonto lonke bese ubona ukuthi kugxile kangakanani kuncishiswa futhi yokuthengisa. Ngokubona kwami, kunciphile. Kaningi kunalokho, sithola ukuthi ngenkathi ukuthengisa kungakhuphuka, izinkampani ezithembele kukho isikhathi eside zingehlisa umkhiqizo wazo.
Kusebenza Kanjani Ukukhangisa?
Amabhizinisi nabathengi ngokufanayo bafuna ukwenza ngcono impilo yabo nokusebenza kahle kwebhizinisi labo. Ngenkathi ingxenye encane yabantu ingahle ibe nokungavikeleki ukukhangisa okwenza imali kukho, ngikholwa ukuthi lokho kuncane. Ngokubona kwami, iningi lezentengiso zenethiwekhi namabhizinisi amaningi wokumaketha asebenza kule nkundla. Wake wamenywa komunye wale micimbi? Yimigubho emikhulu yabantu abajabule abazungeze isiteji bethembisa amasheke amakhulu, amaholide ngisho nezimoto ukunxenxa izivakashi ukuthi zitshale imali bese ziqala ukuzithengisela zona. IVemma, isiphuzo samandla i-MLM, ibisanda kuvela ivale okwesikhashana njengohlelo lwephiramidi.
Yize lokho kweqisa, akuyona into ejwayelekile. Buka isikhangiso esijwayelekile se-Apple futhi ngeke ubone isaphulelo bese uceba izikimu ezisheshayo. Esikhundleni salokho, uzobuka izindaba zabantu abasebenzisa ubuciko babo bangaphakathi basebenzise amadivayisi we-Apple nesoftware njengamathuluzi. Qaphela Ukukhangisa kukaCoca-Cola futhi uzobona ukugxila emicimbini nasezindaweni abakhangisa kuzo, ukuzama ukwakha ukuqwashisa ngomkhiqizo lapho izinkumbulo ezijabulisayo zenzeka khona. Kamuva nje, kuye kwadingeka futhi basebenze ekuboneni iziphuzo ezinoshukela nezingozi zempilo ezivela.
Okunye ukukhangisa kusebenza ngokugqugquzela ukonga imali (izaphulelo), kepha kunezizathu eziningi zokuthi kungani ukukhangisa kusebenza:
Izindawo eziseduze - Kwesinye isikhathi ukukhangisa kuyadingeka ukuhlinzeka izethameli zezifunda ngeqiniso lokuthi unendawo eseduze. Mhlawumbe ufuna i-pizza yesitayela se-NY eduzane, ngakho-ke i-pizzeria yendawo ikhangisa ngemibandela esekwe endaweni kusesho noma ihlose intshisekelo ku-pizza ngaphakathi kwendawo engaphakathi kwendawo yokudlela yabo.
Umbhidlango - Abathengi abaningi bayabhekisisa amabhizinisi agxile ekusimameni, ukwehluka, nasekubandakanyeni komphakathi. Ukukhangisa kungadlala indima enkulu ekulungiseni umbono wenhlangano engenathemba, enkulu ibe yilowo onikeza izibonelelo nemifundaze yokusiza imiphakathi yasendaweni. ISalesforce isanda kwamukela isikole sendawo e-Indianapolis, ukunikela ngama- $ 50,000 emishinini yokubasiza.
Ucwaningo - Uyaphi uma ucwaninga iholide lakho elilandelayo, ukuthenga kwakho imoto okulandelayo, umshwalense wakho, noma ezinye izindleko ezinkulu? Ukukhangisa okuqukethwe okufundisayo ukusiza ukufundisa abathengi namabhizinisi kuqhume eminyakeni yamuva. Ngenkathi inhloso ukwakha ukwethenjwa negunya ngokunikeza ucwaningo oludingekayo, akuhlali kuyinjongo yokugcina yokuthenga. Izikhathi eziningi inikezela ngocwaningo oluyinhloko nolwesibili olwabiwe kabanzi. Imvamisa ngibona izikhangiso eziphathelene nokuqukethwe ezingaba nentshisekelo kubangani bami bese ngikuthumela zona.
Emotion - Ukuxoxa izindaba kugxume kwaqhamuka ezindleleni eziningi zokukhangisa ngoba akugcini ngokuxhumeka ngokomzwelo nezethameli, kuphinde kukhiqizwe ukuhola umbukeli noma umfundi ngendaba. Abanye bangacabanga ngalokhu njengokukhohlisa, kepha lokho akuhlukanisi nesikhangiso esisebenzayo esivusa imizwa.
Ukukholisa - Kusetshenziswa imizwa, ukukhangisa kuvame ukukholisa. UDkt Robert Cialdini ichaza imigomo eyisithupha yendawo yonke yokuthonya eye yafakazelwa ngokwesayensi ukukholisa izethameli zokukhangisa - ukuphindaphinda, ukusweleka, igunya, ukungaguquguquki, ukuthanda nokuvumelana.
Uma inhloso embi yokukhangisa bekungukukhuthaza ukuthengisa, iningi alisebenzi nhlobo. Ukube ukukhangisa bekuyinto embi kanjalo nekhohlisayo, sonke besizobe sigijimela kuMcDonalds ukuchitha isikhathi nomndeni nebhokisi likaMcNuggets! Ukukhangisa kuyabiza futhi, kaningi kunalokho, kungukushintsha imibono futhi kukhulise ukuqwashisa. Ukukhangisa, njengamanye amasu amaningi wokumaketha, kuyisu lesikhathi eside elinobungozi obukhulu obuhambisana nakho.
Ukukhangisa Kusenza Sithenge Kanjani?
Angibuzi amaqhinga abhalwe kule infographic, ngibuza isisusa. Ukukhangisa akukho lapho ukukhohlisa noma ukwesabisa umuntu ukuthi athenge. Ukukhangisa kufanele kuthonye umuzwa ukuze kutholakale umphumela omkhulu - kepha lokho akusho ukuthi kungukukhohlisa… kusho ukuthi kuyafaneleka. Mhlawumbe bengingazizwa ngikhululeke ngokwengeziwe uma isihloko bekungukuthi Ukukhangisa Kusishukumisela Kanjani Ukuthenga. Angikaze ngibone isikhangiso esangiphoqa ukuthi ngichofoze, kepha ngibonile ezinye izikhangiso ezithinte ngqo izidingo zami engizichofozile.
Ngakho-ke esikhundleni salokho, abakhangisi benze i-arsenal evivinywa neyiqiniso yamasu ahlukene ahloselwe ukunakwa ngabathengi. Noma singazi ngaso sonke isikhathi, lawa macebo wonke asebenza kahle kakhulu.
Nayi i-infographic engigxeka kuyo I-WebpageFX.
Tags: khangisaizikhangisoukukhangisaIgunyaUkuqwashisaukuvumelanaukuvumelanaimizweloukukhangisa kusenza sithenge kanjanikusebenza kanjani ukukhangisakusebenza kanjani ukukhangisaukuthandaumbonoukukholisaukukholisafinyelelaukuphindiselaucwaningoumthwalo wemfaneloUkunika Amandla Ukuthengisaukusobalaeduzeikhasi lewebhu fx
Ukuqashelwa Kunikezwa Wena, Igunya Lithathwa Nguwe
May 10, 2016 ku-11: 50 AM
Ngicabanga ukuthi ingxenye ebaluleke kakhulu yezikhangiso isisusa sayo. Uma ikhasimende lingenaso isisusa sokuthenga i-smth sinezinketho ezimbili. Noma dala isisusa (isibonelo esihle se-iPhone) noma usikhohlwe.
Aug 25, 2017 ngo-1: 11 PM
Kucatshangwe kahle kakhulu. Lapho abantu becabanga ngokukhangisa bavame ukukhohlwa ngezinto ezimbalwa. Okokuqala, ibhizinisi elincane. Amabhizinisi amancane, ikakhulukazi ekuqaleni, awanalo “uphawu”. Lokho abakudinga ngempela yikhono lokufinyelela enanini eliphakeme labantu ngezindleko eziphansi kakhulu. Kuphela ngemuva kokuba ukuhweba kwangempela kwenzeka lapho umkhiqizo ungasungulwa. Abakudinga ngempela yikhono nje lokutshela abantu ukuthi iminyango yabo ivulekile futhi bakulungele ukwenza ibhizinisi.
Into yesibili engicabanga ukuthi abantu abaningi bayakhohlwa ngayo ukuthi izangoma zokukhangisa nezinkampani zokukhangisa zibeka amanani azo. Izintengo azibekiwe ngokuhambisana ngqo nalokho okudingwa yibhizinisi elincane. Ngingazimisela ukubheja ukuthi iningi lezakhiwo zamanani zivele zakhiwe ngomoya omncane. Uma izinkampani zokukhangisa nezindlela zokukhangisa zinakekela amaklayenti azo, zizoqinisekisa ukuthi ukukhangisa ezikunikezayo kufanelekile futhi okubaluleke kakhulu ukuthi ibhizinisi elikhangisayo lenza imali eningi ngakho-ke kubiza ukukhangisa.
ngoba nje umkhangisi wokukhangisa ufinyelela kubantu abayizigidi okungeyona neze inkomba yokuthi labo bangabantu abalungile, ukuthi labo bantu bakulungele ukuthenga umkhiqizo noma insizakalo, noma ukuthi banesifiso nomkhiqizo noma insizakalo. Zonke izinkundla eziqhamuka ezinkampanini zokukhangisa yilezo ezizokuvezela i-XY noma i-Z. Abalokothi bathi sizoqinisekisa ukuthi siqhubela abantu emnyango wakho. kuyangijabulisa lapho besho izinto ezinjengokuthi “azikho iziqinisekiso ekukhangiseni.” Impendulo yami kuleso sitatimende ibilokhu ithi, “kunesiqinisekiso esisodwa ekukhangiseni futhi lokho ukuthi uzothatha imali yami. Noma ngabe lokhu onakho kuyangisebenzela noma cha, uzothatha imali yami. ”